Kutumira Policy - hannari-shopu
Ndeipi inotakura hannari inoshandisa, uye yakawanda sei?
Nezve iyo yekudzoka mutemo, ndapota pora HERE for the details.
Kutakura kwemahara pasi rese!
Chinhu ichocho chichaendeswa kunzvimbo dzepasi rese kubva kuJapan neDHL ine yakazara yakazara yekutevera.
Isu tinoendesa kune kero iyo yakanyoreswa nePayPal kana kadhi rechikwereti positi kero Chete. Chinhu ichocho chinenge chakaputirwa nokungwarira muhuputi hwekuputira uye bhegi repurasitiki, uye woiswa mubhokisi rekadhibhokisi.
Mutengo wechinhu kana mutero wekutumira haubatanidzi mabasa ekupinza kana mubhadharo. Izvi zvinopomerwa ibasa remutengi. Ndokumbira ubvunze hofisi yako weCustoms yenyika yako kuti uone kuti aya mimwe mari ichave ipi usati watenga. Hatibiridzi fomu dzetsika - mitemo yehurumende yeU.S. neInyika inorambidza maitiro akadaro.
Kana uine chero mibvunzo, ndapota inzwa wakasununguka kuti kumbira isu.
*: zvimwe zvinhu zvakakura kwazvo zvichabhadharwa mari yekutumira.